Nin lagu eedeeyay maalgelinta Al-shabaab oo lagu xukumay Mareynkanka . - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxkamad ku taalo magaalada Miami ee dalka Mareynkanka ayaa xukun 15-sano ah ku riday nin American ah oo lagu eedeeyay inuu taageeri maaliyadeed siin jiray dagaalyahanada Al-Qaa’ida xiriirka la leh ee Al-shabaab Jabhada Al-nusra ee Syria.
Saraakiisha cadaalada Mareynkanka ayaa shaaca ka qaaday in Ninka lagu magacaabo Gufran Ahmed Kauser Mohammed, oo 31-sano jir ah Maxkamada ay ku heshay danbiga lagu soo oogay,islamarkaana isaga qudhiisa uu qirtay inuu dhaqaalo siin jiray Al-shabaab iyo Jabhada.
Mahamed oo ku noolaa Dammam iyo Saudi Arabia, ayaa wada shaqeyn waxay ka dhaxeysay Mohamed Hussein oo sanadkii la soo dhaafay la xiray ka dib shaki laga muujiyay howsha uu faraha kula jiro.
31-sano jirkaan ayaa sheegay inay maalgelin jiray ururka Al-shabaab iyo Alnusra.
Dowlada Mareynkanka ayaa horay u xukuntay dad badan ay ku eedeysay inay taageerayeen ururada xiriirka la leh waxay ugu yeereen argagixisada..
Falastiin Oo Qaramada Miboode Hor dhigi doonta Mooshin Cod loo qaadi doono